Iialamu zeRingi kunye neekhamera zongeza izaphulelo ezinkulu | Ndisuka kuMac
Iialamu zokukhala kunye neekhamera zongeza izaphulelo ezibalulekileyo
Uninzi lwabasebenzisi be-alam besiqhelo bajikela kwii-alam zesimbo se-Ring. Ngolu hlobo lwee-alamu, ezifana nezo zinikezelwa ngamafemu e-Ring-style, inkonzo enomdla inikezelwa edibanisa iikhamera zokhuseleko ze-brand kunye ne-alamu. Oku kuthetha ukuba sinokuba nayo yonke into ekwipakethi enexabiso elihlengahlengisiweyo kakhulu kunoko basicelayo nge-alamu eqhagamshelweyo. Nakweyiphi na imeko, zombini iinketho ziyasebenza, zombini iialam eziqhelekileyo ziqhagamshelwe kwaye ezi zisuka kwiRing, umntu ngamnye ukukhetha ukhetho olumfaneleyo.
Ngoku ukubhiyozela i-«IiNtsuku eziMnyama» sifumana ii-alam zeRingi ezinezaphulelo ezibalulekileyo
Kwaye kukuba inkampani yeemveliso ezikrelekrele zokhuseleko ekhaya iqala kwiwebhusayithi yayo inikezela ngokhuseleko oluhlakaniphile lwendlu yonke ukusuka nge-16 ukuya kwi-29 kaNovemba kwiiNtsuku eziMnyama ngelixa unikezelo lusekho. Oku kuthetha ukuba sinokuwonwabela amaxabiso anomdla ngokwenene ngeentsuku ezimbalwa kwaye abo bafuna ukuthabatha ithuba kuwo.
Phakathi kwezona zinikezelo zibalaseleyo sadibana nazo Ring 2nd Generation Alarm Kit es inkqubo yokhuseleko "Yenze ngokwakho" Ayifuni kufakelo lobuchwephesha, ukomba, okanye uhlengahlengiso olusisigxina kwikhaya, nto leyo eyenza ibe sisixhobo esilungele abaninimzi kunye nabarentayo. I IVidiyo yentsimbi emnyango Yeyona ntsimbi yasecangweni efikelelekayo kwiRingi okwangoku, evumela umsebenzisi ukuba abone kwaye athethe neendwendwe ezisuka naphi na.
Iqela Precio DAYS EMNYAMA ixabiso
I-alamu ye-2nd gen. + Indoor Cam 308,00 € 149,00 €
I-alamu ye-2nd gen. 249,00 € 149,00 €
IVidiyo yentsimbi emnyango 59,00 € 39,00 €
Kule meko i Izixhobo zokukhala Abafuni ukubhaliselwa kwenkonzo enyanzelekileyo, bahlawulwa kanye kwaye yiloo nto. Ezi zixhobo zinokudityaniswa kwaye zilawulwe ngesicelo seRingi sasimahla kuzo zombini i-iOS, i-macOS kunye nezixhobo ze-Android, apho umsebenzisi afumana izaziso ngexesha langempela xa i-alamu, ikhamera okanye intsimbi yomnyango ibona ukunyakaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Iialamu zokukhala kunye neekhamera zongeza izaphulelo ezibalulekileyo
Kukho umhla wokukhutshwa kweApple TV + comedy "The Afterparty"